जीवनशैली Archives | SawalNepal
पानी जीवनको आधार हो। धर्मशास्त्र र दर्शनदेखि विज्ञानसम्मले जीवको उत्पत्ति पानीमै भएको तथ्यलाई स्वीकारेका छन्। पृथ्वी र हाम्रो शरीरमा पानीकै बाहुल्यता छ। तर पनि यसको महत्वलाई बुझ्न नसक्दा मानिसले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्। पानीको महत्वलाई सबैसामु छर्लंग पार्ने र स्वच्छ पानीका स्रोतहरुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो विकासका लागि वकालत गर्ने अभिप्रायले १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको
भिडियो हेर्नुहोस चाणक्यका अनुसार बिहान उठ्ने बित्तिकै भुलेर पनि नगर्नुहोस यी ४ काम, हुनेछ अशुभ
काठमाडौ । चाणक्यनिति आज पनि विश्वभर प्रचलित रहेको छ । किनभने उनी पाटलीपुत्रका विद्वान थिए । अहिलेसम्म चाणक्यनितिले धेरै मानिसहरुको जीवनलाई परिवर्तन गरिसकेको छ । आज हामी उनको जीवन परिवर्तन गर्ने केही बचनहरुको बारेमा कुराकानी गदै छौ । त्यसोभए उनको अनुसार बिहान उठ्दा कस्ता बस्तुहरु देख्नु अशुभ हुन्छ ।जान्नुस् -पहिलो कुरा विहान उठने बित्तिकै ऐना
वास्तुशाश्त्र भन्छ बिहान उठ्ने बितिकै उत्तर तर्फ पाइला चलाउदा फाईदै-फाइदा
विहान उठ्नासाथ धर्ती(पृथ्वी)मा टेक्नुभन्दा पहिला धर्ती(पृथ्वी) लाई प्रणाम गर्न सल्लाह दिन्छ । किनकी धर्ती हाम्रो पालनकर्ता हो । हाम्रो जीवनका लागि सबै आवश्यक पदार्थ धर्तीले नै हामीलाई उपलव्ध गराउँछ चाहे पानी या भोजन । त्यसैले धर्तीको सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । धर्तीलाई नमस्कार गरेर र उ प्रति आभार प्रकट गरि हामी आफ्नो सौभाग्य
काठमाडौं – महाभारतको युद्ध समाप्त भएपछि पाण्डवहरू धृतराष्ट्र र गान्धारीलाई भेट्न गएका थिए । त्यतिखेर गान्धारी दुर्योधनलाई अन्यायपूर्वक मारिएकोमा पाण्डवहरूप्रति क्रुद्ध थिइन् । पाण्डवहरू डराउँदै डराउँदै गान्धारीकहाँ पुगे । गान्धारीले दुर्योधन वधको प्रसंग निकालेपछि भीमले भने, ‘मैले अधर्मका साथ दुर्योधनलाई नमारेको भए उसले मेरो हत्या गरिदिन्थ्यो । धर्मयुद्धमा दुर्योधनलाई जित्न सकिँदैनथियो ।’ अनि गान्धारीले युद्धभूमिमा दुःशासनको
दुख ,कष्ट ,दुर्घटना र अनिस्टबाट बचिरहन सधै गर्नुहोस यी कामहरु: बास्तु शास्त्रका अनुसार विभिन्न कारणले घरमा केहि न केहि नराम्रो भइरहेको हुन्छ । बास्तु नमिल्दा घर परिवारमा अशान्ति दुख कस्ट दुर्घटनाको सम्भावना रहेको पाइन्छ । यदि घरमा बास्तु मिल्ने हो भने त्यो घरमा अशान्ति र दुख कहिल्यै हुदैँन । बास्तुले घरमा सकारात्मक र नकारात्मक उर्जा दिने
हेर्नुहोस कपाल लामो बनाउने उपाय
हिजोआज अधिकांश महिलालाई कपालसँग सम्बन्धित समस्याले सताएको हुन्छ । धेरैजसोमा कपाल झर्ने समस्या हुन्छ भने कतिलाई कपाल लामो नहुने समस्याले पिरोलेको हुन्छ । कपाल निकै कम मात्रामा बढ्ने वा बढ्दै नबढ्ने समस्याका कारण धेरै हुन सक्छन् । जसमध्ये प्रदूषण, अस्वस्थ जीवनशैली, खाना सम्बन्धित नराम्रो बानी र शारीरिक गतिविधि आदि हुन सक्छ । त्यसैले, कपाल बढेन
सोमबार शिवजीको ब्रत किन बस्ने…?
एकजना असाध्यै धनवान व्यापारी थियो, उसको घरमा धन आदिको कुनै किसिमको कमी हुँदैनथ्यो। तर ऊ सन्ततिसुखको अभावको पीडा भोग्दै थियो। यही नै साहूको चिन्ताको विषय थियो। ऊ पुत्रको कामना गर्दै प्रति सोमवारका दिन शिवजीको व्रत र पूजन गर्ने गर्दथ्यो र सायंकालमा शिव मन्दिरमा गएर शिवजीको श्री विग्रहअगाडि दियो बाल्ने गर्थ्यो। उसको यस भक्तिभावलाई विचार गरेर
बच्चाले खाना नखाएर हैरान लगाएको छन भने गर्नुस् यस्तो उपाय
काठमाडौँ । यदि तपाईको घरमा बच्चा छन् भने बच्चाले खाना नखाएर तपाईलाई हैरान त पक्कै बनाएका होलान् । बच्चाले खाना नखाएर तपाई आफै दिक्क हुनुभएको होला । यदि तपाई आफ्नो बच्चालाई सजिलै खाना खाने बनाउन चाहनुहुन्छ भने बच्चालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । आज हामी तपाईहरुलाई बच्चालाई खाना कसरी कुन समयमा कति समयको फरकमा खुवाउने
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘निवृत्तभरण कोष, विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने’ प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त, विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले किसान र मजदूरलाई पनि निवृत्तभरण दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले रु
के तपाई खुसी रहन चाहनुहुन्छ ? कहिल्यै नभुल्नुस् यी ६ कुरा
हरेक मानिस खुसी हुन चाहन्छ । तर धेरैले जीवन जिउने तरिका नजानेर दुःखी हुन्छन् । मनदेखि प्रसन्न ब्यक्ति शारीरिकरुपमा पनि स्वस्थ हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यहाँ जीवनमा खुसी रहन गर्नु पर्ने छ चीजको चर्चा गरिएको छ । १ हसाउँने कुराहरु हेर्नुस् हाँसोले जीवनलाई सहज बनाउँछ । हाँसो रोक्दा घाटा हुन्छ । हाँसोलाई सके सम्म उजागर